Pokemon TCG ကအွန်လိုင်း APK ဖိုင်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
Pokemon TCG ကအွန်လိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်: အဆိုပါပိုကီမွန် TCG ကအွန်လိုင်းကမ္ဘာတဝှမ်းကစားသမားဆန့်ကျင်သွားကြဖို့တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. Download ပြုလုပ်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအခုမှစများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးဝင်ရောက်. ကစားသမားအစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအားဖြင့်ဘာမှမယ်ယူစရာမလိုပေ, သူတို့လိုအပ်သမျှနှင့်အတူပေးနေကြတယ်, အသစ်ကတ်များဝင်ငွေများစွာနည်းလမ်းများနှင့်အခြားဆုလာဘ်ရှိပါတယ်!
သငျသညျသစ်တစ်ခုကစားသမားရောက်နေတယ်ဆိုရင်, မစိုးရိမ်ပါ, အားလုံးကစားသမားစပိုင်းတွင် In-ဂိမ်းကျူတိုရီရယ်အစုတခုကတဆင့်ညွှန်ကြားပြီးတော့အားလုံးဂိမ်း features တွေရှေ့တော်၌ထိုသင်တန်းပေးစိန်ခေါ်မှုအတွက်ကိုက်ညီမှုများ၏ set အစအဦးလက်လှမ်းဖြစ်ကြ၏. Upon logging into the ပိုကီမွန် TCG အွန်လိုင်း, ကစားသမားတစ်ဦးကို virtual "ဂိမ်းဆိုင်" မှာသူတို့ရဲ့စွန့်စားမှုစတင်ရန်, လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းကသူတို့ကိုကြိုဆိုတဲ့.
There are five primary Play modes available. These are Trainer Challenge, Versus Mode, Tournament Mode, Tutorial Mode, and Quick Match. ထို့အပြင်, Friend Battle and Play Testing are available under Friends in the Social menu and the Deck Manager respectively.
There are three currencies available in the ပိုကီမွန် TCG အွန်လိုင်း. ဤရွေ့ကားသင်တန်းပေးသူတိုကင်များဖြစ်ကြသည်, အဖြစ်အပျက်လက်မှတ်တွေ, နှင့်ကျောက်မျက်ရတနာ. သင်တန်းပေးသူတိုကင်များနှင့်ပွဲလက်မှတ်တွေသာလျှင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လက်ရှိရယူနိုင်သောများမှာ.
ရှစ်မူလတန်းဆုကြေးစနစ်များရှိပါတယ် features အသစ်တွေလည်းပါဝင်ကြသည်: Bonus Wheel, Daily Challenge, Daily Login Bonus, Daily Match Bonus, Game play rewards, Mystery Box, Special Challenges, Tournament Chests, and Versus Ladder. အပိုဆောင်းဂိမ်းကစားဆုလာဘ်စနစ်များကိုဂိမ်းကစားလေးမူလတန်း Modes သာ၏တစ်ဦးချင်းစီသို့ built နေကြတယ်: Trainers Challenge, Versus Mode, Tournament Mode, and Tutorial Mode. Takealook at all of the opportunities for you to earn rewards and bonuses in the ပိုကီမွန် TCG အွန်လိုင်း.
မြက်ထံမှ Choose, မီး, သို့မဟုတ်ရေကုန်းပတ်, ညာဘက်ဂိမ်းတစ်ခုထဲသို့ခြေလှမ်း, သငျတို့သညျလှယျကူကစားအတွေ့အကြုံကိုအတွက် go အဖြစ်လေ့လာသင်ယူ.
ကဒ်များကိုရယူနိုင်သော, ပွင့်လင်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ကဒ်, အခြားကစားသမားတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှု, နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးကတ်များန်းကျင်စုံလင်ကုန်းပတ်တည်ဆောက်. သင်၏စုဆောင်းမှုသင်တို့နှင့်အတူအပေါက်!
သင့်ကိုယ်ပိုင်ကုန်းပတ် Build, သင့်ရဲ့ကတ်များ၏အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်, ကုန်းပတ်သေတ္တာများ, နှင့်ကိုယ်ပွား, နှင့်အွန်လိုင်းသင်၏မိတ်ဆွေများ join.
TEKKEN .apk ဒေါင်းလုပ်
သေလွန်သောသူတို့သည်ကျွန်း: အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ APK ကိုဒေါင်းလုပ်
လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ: ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့ APK ကိုဒေါင်းလုပ်
သင်သည်သင်၏ကုန်းပတ်ဒီဇိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုခံစားရသည့်အခါ, အခြားကစားသမားစိန်ခေါ်သို့မဟုတ်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာပြသနေတဲ့ပြိုင်ပွဲ join.
ဗားရှင်း: 2.52.0 (3746)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်လ 18, 2018
ဖိုင်အရွယ်အစား: 26 ကို MB
Pokemon TCG အွန်လိုင်း 2.51.0 .APK ကို
Pokemon TCG အွန်လိုင်း 2.50.0 .APK ကို
Pokemon TCG အွန်လိုင်း 2.49.0 .APK ကို
ခရစ်ကက်ကပ်21.0.0 APK ကို
Samsung ကအင်တာနက်ကို Lite ကို / Go ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
အကြှနျုပျ၏ Tamagotchi ထာဝစဉ် APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ရီးရဲလ်စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ Download (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး, န့်အသတ်ပိုက်ဆံ) 1.0.7 android ဖုန်းများအတွက်
Adobe Acrobat Reader ကို APK ကိုမိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ Download
ပထဝီသတင်းများ APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့သတင်းများ & မဂ္ဂဇင်းများ | လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ